Clenbuterol (CLEN) budada HCL (21898-19-1) hplc≥98% | AASraw
Budada Clenbuterol hydrochloride
4.00 ka mid ah 5 ku saleysan 8 ratings macaamiisha
SKU: 21898-19-1. Category: Xabbad dufan leh
AASraw waxay la jirtaa awood iyo soosaarid laga bilaabo gram ilaa amar ballaaran ee Clenbuterol (clen) budada HCL (21898-19-1), oo hoos timaada qaanuunka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada tayada la socon karo.
Clenbuterol (CLEN) HCL budada fiidiyowga
|.Budada Cuntada ah ee loo yaqaan 'Raw Clenbuterol (CLEN) budada HCL Calaamadaha aasaasiga ah:
Name: Clenbuterol (CLEN) budada HCL
Formula kelli: C12H19C3N2O
II.Raw Clenbuterol (CLEN) Isticmaalka budada HCL ee wareega steroids
Clenbuterol hydrochloride (CAS 21898-19-1) sida caadiga ah waxaa loogu magacaabay Clen, Clen HCL, by bodybuilders ama isticmaaleyaasha dufanku ku badan yahay.
2. Adeegsiga budada Clenbuterol HCL:
Clenbuterol hydrochloride waxay leedahay awood xoogan oo gubta dufanka. Waxay sidoo kale leedahay saameyn kuleyl weyn (waxay sare u qaadeysaa heerkulka jirka). Clen wuxuu kordhiyaa dhiig karka wuxuuna wadnaha sii adkeeyaa. Kicintaani waxay horseedaa kor u kaca heerkulka jirka. Sida laga soo xigtay xogta, waxay sidoo kale keentaa glycogenolysis (burburka glycogen), taasina waa sababta ay u caawineyso gubidda dufanka jirka.
3. Digniin ku saabsan budada Clenbuterol HCL:
Tilmaamaha '4.F bayani ee budada Clenbuterol HCL:
Suuqa dhexdiisa, waxaa jira Clen badan oo been abuur ah, oo ah Salbutamol caadi ahaan.
Haddii aad leedahay Clenbuterol sharci ah waxaad u baahan tahay inaad qaadato heerkulkaaga. Kahor intaadan bilaabin wareegga Clen, qaado heerkulkaaga subaxda ka dibna intaad Clen ku sii jirto mar labaad qaad.
Haddii ay tahay heshiiska dhabta ah waxaad arki doontaa xoogaa yar oo ah heerkulka jirka. Waa inaad sidoo kale la kulantaa gariir gacanta iyo garaaca wadnaha oo aad u dhakhso badan. Qaar idinka mid ah kuma dhici doontid saameyntan qiyaasta hoose, sidaa daraadeed qiyaasta daawo oo arag waxa dhaca. Hadday midkoodna waxyaalahaas dhicin xitaa haddii aad qaadatid qiyaaso 80-100mcg, markaa iska cad inaad ku garaacday.
5. Raw Clenbuterol HCL budada (CAS 21898-19-1):
Beenta caanka ah ee loo yaqaan 'Clen' ayaa ah Salbutamol, oo sidoo kale loo yaqaan albutamol. Farqiga ugu weyn ee iyaga ka mid ah waa qiyaasta daawada. Clen wuxuu joogaa 40mcg iyo salbutamol wuxuu ku yaal 100mg. Waxaad uun u urin kartaa budada cayriin waxaadna ogaan kartaa midka dhabta ah. Tijaabada daahirnimada, waxaad u baahan kartaa inaad sameyso tijaabada HPLC.
6. Clenbuterol HCL budada Recipes:
Samaynta budada Liquid Clen HCL at 100mcg / ml
FIIRO GAAR AH: Ku daadinta labadan xarumood waxay noqon kartaa mid qatar ah, ha is dul dhigin ilaa aad runtii ogaatid waxaad sameyneyso, ama si xun ayaad ufiiri kartaa. Eeg qodobka hoose.
Biyo Kala Diray
Miisaan Dijital ah
Dhalooyinka iyo kuwa caleenta ah (oo laga cabbiro kuwa cajiyeyaasha ah)
Gacmo Gelinta Dambe
Dambiyada loo yaqaan 'Tyvek Suit'
Weelka dareeraha ah ee 12 Liter weyn (baaldi ayaa ku filan)
Sameynta 100mcg / ml Clenbuterol (Cuntadani wuxuu u shaqeyn doonaa T3 sidoo kale).
Haddii qof i arko xisaabta qalad ah i ogeysii, laakiin waxaan u maleynayaa inaan lacagtan ku galayo tan.
BA-da waxay u adag tahay kala-diridda budada iyo u-haynta wax soo-saarka wasakhda ah, i rumee ma jiraan wax kale oo karaahiyo ah oo markaa qaadan doona qaadashada qaddarkaaga maalinlaha ah iyo helitaanka in bakteeriyada qaar ka dhigtay inay gumeysi ku jiraan shaashaddaada (halkaa ayaa lagu sameeyay). Marka waxaan u adeegsan doonnaa 1% karimadan.
Cuntadani waxaa loogu talagalay in loo badalo 1 gram oo ah budo (haddii xisaabkeygu uu sax yahay waxay sameyn doontaa qiyaasta 10,000).
Biyo kharribay = 9.9 Liters (9,900 mL). Haa taasi waa litir, taasi ma aha sawir khaldan, mar labaad tan waxaan u qaadanayaa in xisaabtu ay sax tahay.)
Tallaabada 1. Xidho suufka Tyvek. Nabdoonaanta waxaa waajib ku ah Clenbuterol.
Tallaabada 2. Xiro maaskaro rinjiyeyaal
Tallaabada 3. Gasho galoofyada. Ku-riixida shaashadu waa ikhtiyaari.
Tallaabada 4. Ku cabir budo cabir. Waxaad dooneysaa inaad 100% hubiso ujeedooyinka qaadashada.
Tallaabada 5. Ku dar budada dubista.
Tallaabada 6. Ku dar BA walaaq si uu u milmo.
Tallaabada 7. Ku rid biyo weel weyn.
Tallaabada 8. Kudar Isku dar ah Clen biyo oo si wanaagsan u walaaq.
Tallaabada 9. Dhex dhig dhalooyinka iyo ku dar dusha.
Wax soo saarka ugu dambeeya waa inuu ahaadaa 10 litir oo Clen at 100mcg / ml.
Cuntadani waxaa loogu talagalay ujeedooyinka madadaalada khiyaaliga ah waana inaan la isku deyin. Kuwani waa kiimikooyin halis ah. Sidoo kale waa fikrad oo aan lagu dhaqaaqin ficil ahaan.
-IMO waxaa jira hal dariiqo oo tan lagu sameeyo ka hor intaadan alaabtan baaldiyo ku dhex sameyn… aad u fudud…
- hal-cabir 0.2g's (haa taasi waa tiro jajab ah, si sax ah ayaad u aqrinaysaa)
-isay 200mls of everclear weel lagu qaso oo nooc ka mid ah, ama bakhaarka
-iyo 0.2g's oo ah budo cad, oo isticmaal kuleyl hooseeya… tani aad bay u fududahay inaad dawakhdo si aad u samir u yeesho hana iska fogeyn.
- ka dib dhalaalkeeda waxay ku shubtaa xalka xiiqda weel weyn oo nooc ah… waxaan u isticmaalaa biyo galoolan oo leh xarkaha kore.
-dhis ku dar 800ml ee biyaha durugsan…
-BAM!… Waxaad haysataa 1000ml ee dareeraha sharafta leh @ 200mcg / ml
- soo jiid oo buuxi fiidiyoowga 50ml ama 100ml iyo wixii aad sameysay.
Kiniiniyada budada ee Clenbuterol HCL – 20mcg
1. Isku qas dhamaan waxyaabaha kujira qolka iskuxiraha ah ee Turbula, oo ku dhaji kiniiniyada isugeynta 20kN.
2. Ku cadaadi kiniiniyada 100mg, adoo isticmaalaya feeraha 8mm.
7. Suuqgeynta budada Clenbuterol HCL:
IV. Sida loo iibsado budada Raw Clenbuterol HCL (CAS 21898-19-1); ka iibsataa budada CLEN HCL budada AASraw?